सौराहाका होटल खुले तर निकुञ्ज खुलेन
साउन १६, चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य प्रवेशद्वार सौराहाका होटल बिहीवारबाट खुलेसँगै चहलपहल शुरु भएको छ । होटलमा पर्यटक आउन शुरु गरेका छन् भने रेष्टुरेण्टमा ग्राहक देखिन थालेका छन् ।
जंगल वाइल्डलाइफ क्याम्पका सञ्चालक नारायण भट्टरार्ईले होटल खुलेकै दिन दुई विदेशी पर्यटक आएको बताए । होटलको सरसफाइ, मर्मत सम्भारसँगै उच्च सावधानीका साथ पाहुनाको स्वागतमा व्यवसायी जुटेको क्षेत्रीय होटल संघका पूर्वअध्यक्ष रहेका भट्टरार्ईले जानकारी दिए ।
जंगल सफारी लजमा पनि शुक्रवार तीन ओटा कोठा बुकिङ भएको सञ्चालक सुमन घिमिरेले बताए । संघका निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेले होटल खुलेसँगै बिहीवारबाट चहलपहल बढेको बताए । स्थानीय र आसपासका क्षेत्रबाट चार महीनापछि खुलेको सौराहा हेर्न मानिस आएको उनले जानकारी दिए । सौराहामा ११० ओटा होटल सञ्चालनमा छन् ।
घिमिरेले भने, ‘यो सिजन नभए पनि लामो समयपछि होटल खुल्दा व्यवसायी आशावादी भएका छन् ।’
होटललाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सस्तो र आकर्षक प्याकेज बनाउन साझारूपमा र एकल व्यवसायी जुटिरहेको उनले जानकारी दिए । संघका अध्यक्ष दीपक भट्टरार्ईले स्थानीय कर्मचारीलाई बोलाएर होटल सञ्चालन गरिएको बताए । २५प्रतिशत हाराहारी कर्मचारीले होटल शुरु गरेको उनले जानकारी दिए ।
क्रमशः पर्यटक बढ्दै गएपछि कर्मचारी थप गर्दै लैजाने तयारी गरिएको छ । सौराहामा होटलमा प्रत्यक्षरूपमा ५ हजार ५०० भन्दा बढी कामदारले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन् । लकडाउनसँगै अधिकांश कामदारलाई होटलले छुट्टी दिएका थिए ।
होटल तथा रेष्टुरेण्ट खुलेसँगै व्यवसायीले आफ्ना कामदारलाई बोलाएर नियमित काममा लगाउन थालेका हुन् । सरकारले यही साउन १५ गतेदेखि देशभरका होटल तथा रेष्टुरेण्ट विशेष सावधानी अपनाएर खोल्ने निर्णय गरेसँगै सौराहाका होटल खुलेका हुन् । होटलले कोभिड–१९ बाट बच्न आवश्यक सूचना टाँस गर्ने, पर्यटकको ज्वरो जाँच, हात धुने र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरेको भट्टराईले जानकारी दिए ।
दशैं र दशैंपछि हुने पर्यटकीय गतिविधिलाई लक्षित गरी अहिलेबाट तयारी थालिएको छ । हवाई र सडक यातायातमा लागेको प्रतिबन्ध तथा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान पास चाहिने विद्यमान अवस्थाका कारण तत्कालै पर्यटक बढ्ने आशा व्यवसायीले गरेका छैनन् ।
गत वर्ष पनि यो पर्यटकीय मौसम नभएकाले न्यून पर्यटक मात्र आउने गर्दथे । उनका अनुसार विगतका वर्षमा यति बेला ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र पर्यटक हुने गर्दथे ।
होटलसँगै रेष्टुरेण्ट पनि खुलेका छन् । रेष्टुरेण्ट एण्ड बार एशोसिएशन (रेवान) का पूर्वअध्यक्ष गोकर्ण गिरीका अनुसार रेष्टुरेण्टमा ग्राहकहरु आउन थालेका छन् । सौराहामा १०० हाराहारी रेष्टुरेण्ट छन् । तीमध्ये ५६ ओटा रेवानका सदस्य छन् । आधाभन्दा बढी रेष्टुरेण्ट खुलेको उनले जानकारी दिए । थोरै कर्मचारीबाट काम थालिएको उनको भनाइ छ । गिरीले भने, ‘हामीलाई आशा जगाएको छ ।’
होटल खुल्यो, निकुञ्ज खुलेन
सौराहा आउने पर्यटक हात्ती चढेर स्थानीय सामुदायिक वनमा रमाउने, राप्ती नदीमा डुंगा चढ्ने, जंगलमा पैदल यात्रा गर्ने गर्दछन् । सबै गतिविधिका लागि विदेशी पर्यटकले निकुञ्जको प्रवेश टिकट लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि निकुञ्जले औपचारिकरूपमा अनुमति दिनुपर्दछ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका निमित्त महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले कोरोनाको संक्रमण जारी नै रहेकाले अध्ययन र छलफल गरेर मात्र निकुञ्जले अनुमति दिने बताए । उनले भने, ‘रोगको संक्रमणको डर वन्यजन्तुलाई पनि हुन सक्छ ।’
सौराहा आउने पर्यटकलाई हात्ती चढाएर स्थानीय कुमरोज, बाघमारा, चित्रसेन र खोरसोर मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा घुमाउन लगिन्छ । सामुदायिक वनमा घुमे पनि आन्तरिक पर्यटकले प्रतिव्यक्ति रू. १००, भारतीयले रू.१ हजार ६०० र अन्य देशकाले रू. २ हजार निकुञ्जलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । वन र वन्यजन्तुसँग रमाउनका लागि पर्यटक सौराहा आउने गर्दछन् । रासस